လူသားအားလုံးအတွက်: April 2011
ပထမဆုံး အာဖဂနျအမြိုးသမီး street artist .....
အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရက နိုငျငံတဝနျး အရေးပျေါအခွအေနကွေညော
How Vegan Leather Is Made From Mangoes | World Wide Waste
မြန်မာနိုင်ငံမှ မြင်တွေ့ခွင့်ရနိုင်သော ကြယ်မိုးရွာသွန်းမှု မေလ ၆ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်ရန်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံမှ မြင်တွေ့ခွင့်ရနိုင်သော ကြယ်မိုးရွာသွန်းမှုလာမည့် မေလ ၆ ရက်နေ့၌ ဖြစ်ပေါ်ရန် ရှိကြောင်း နက္ခတ်ပညာရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သတင်းရရှိပါသည်။
ကြယ်မိုးရွာသွန်းမှုသည် တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျရှစ်ကြိမ်ခန့် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော်လည်း ယင်းသို့ဖြစ်ပေါ်မှုကို ရာသီဥတု အခြေအနေနှင့် လအလင်းရောင်ပေါ် မူတည်၍ ရံဖန်ရံခါမှ မြင်တွေ့ရလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။ နွေရာသီကာလတွင်သာ အဓိက မြင်တွေ့ခွင့် ရရှိနိုင်ကာ လအလင်းရောင် မရှိသော လကွယ်နေ့၌ ဖြစ်ပေါ်မှသာ သေချာစွာ မြင်ရနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
''ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့က ကြယ်မိုးရွာခဲ့ပေမယ့် အဲဒီနေ့တုန်းက လမင်းရဲ့ အလင်းရောင်က ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိနေတဲ့အတွက် ဖြစ်စဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံကနေ မြင်တွေ့ခွင့် မရှိခဲ့ဘူး။ အခုဖြစ်မယ့်ဖြစ်စဉ်မှာတော့ လအလင်းရောင်က နှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိတဲ့အတွက် မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကြယ်မိုးရွာတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းက တစ်နှစ်ကို ကမ္ဘာက နေကို တစ်ပတ်ပြည့်အောင် လှည့်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဥက္ကာပျံ အစအနတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အုပ်စုတွေကို ဖြတ်သန်း ရတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကမ္ဘာရဲ့ ဆွဲငင်အားကြောင့် ဥက္ကာပျံ အစလေးတွေကို လေထုထဲမှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့က ချေဖျက်လိုက်တဲ့အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုး နှစ်ခုပူးရင် အလင်းရောင် ဖြာထွက်လာတဲ့ သဏ္ဌာန်မျိုး ကောင်းကင်မှာ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒါကို ကြယ်မိုးရွာတဲ့လို့ ခေါ်ပါတယ်''ဟု နိုင်ငံတကာရေးရာ နက္ခတ်သိပံ္ပအဖွဲ့မှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးဇေယျာကိုက ဆိုပါသည်။
Posted by မောင်စေတနာ at 10:14 PM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: မြန်မာ သတင်း
Photo လှလှလေးတွေ လိုချင်ရင် ...
Photo ပုံလှလှလေးတွေ လိုချင်သော သူငယ်ချင်း
ပုံလေးတွေကို အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ လက်ဆောင် ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း
လိုချင်တဲ့ ပုံလေးတွေ တစ်နေရာတည်းမှာ
Posted by မောင်စေတနာ at 7:33 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
သုခ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း ပြည်တွင် ဖွင့်မည်
နာရေးကူညီမှု အသင်း (ရန်ကုန်) ၏ သုခ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း (ခွဲ) ကို ပြည်မြို့တွင် လာမည့် ဇွန်လအတွင်း၌ မြို့ခံ ပရဟိတ သွေးလှူရှင်အသင်းဝင် လူငယ်များ၏ အကူအညီဖြင့် ဖွင့်လှစ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နာရေးကူညီမှု အသင်းကို ထူထောင်သူ ဦးကျော်သူက “ပြည်မြို့က မိုးမေတ္တာ ပရဟိတ လူငယ် သွေးလှူရှင် အဖွဲ့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဖွင့်မှာပါ။ ဒီလူငယ်တွေနဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ လက်တွဲ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သောက်သုံးရေ အတွက် ရေတွင်းရေကန် တူးဖော်ရေးတွေကိ်ု ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်စေပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေတယ်။ အခုလည်း ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့ မြေနေရာ၊ အဆောက်အအုံ အသင့် ဖြစ်နေပါပြီ” ဟု ပြောသည်။
မိုးမေတ္တာ ပရဟိတ လူငယ် သွေးလှူရှင်များ အသင်းသည် ၂၀၁၀ ဇူလိုင် ၂ ရက်နေ့တွင် လူမှုရေး၌ တက်ကြွသူ ပြည်မြို့ခံ လူငယ် ၂၀ ခန့်ဖြင့် ရုံးခန်းဖွင့်ခဲ့ပြီး ပြည်မြို့ ဆေးရုံကြီးအပြင် တခြား သွေးလိုအပ်သည့် နေရာများသို့ ထိထိ ရောက်ရောက် ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
၎င်းအဖွဲ့သည် သြ၀ါဒါစရိယ နာယက ရွှေပေါက်ပင် ဆရာတော်၏ စီစဉ်မှုဖြင့် အသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်ရေး စီမံချက်များ ရေးဆွဲကာ ၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီ ၇ ရက်တွင် သက်ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြ လျှောက်ထား ခဲ့ပြီးနောက် ထိုသို့ ပရဟိတ သွေးလှူရှင်များအသင်း ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရက် နေ့စွဲဖြင့် သက်ဆိုင်ရာက ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟု အသင်း အတွင်းရေးမှူး ကိုညီညီအောင်က ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ သူက “နာရေးကူညီမှု အသင်းက ဆရာမ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်က ပြည်မြို့ရဲ့ မိဘမဲ့ ကျောင်း တကျောင်းမှာ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်းဖွင့်ဖို့ ရောက်လာတော့ သောက်သုံးရေ ရရှိရေး၊ ရေတွင်းရေကန် တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ဒီဘက်မှာ လုပ်ရင် မိုးမေတ္တာက ဦးဆောင် နိုင်မလား ဆိုပြီး ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သောက်သုံးရေ ရရှိရေး ကော်မတီ ဖွဲ့လိုက်ပြီး အ၀ီစိတွင်း တူးဖော်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
သို့ဖြင့် “အများပြည်သူ ကောင်းမှု၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) မှ အခမဲ့ လှူဒါန်းသည်” ဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ် တင်ထားသော သောက်သုံးရေ အ၀ီစိတွင်း ၁၆ တွင်းကို မိုးမေတ္တာ လူငယ်အဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အောင်မြင်စွာ တူးဖော် လှူဒါန်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ပဲခူးတိုင်း အနောက်ခြမ်း သဲကုန်းမြို့နယ် ပုတီးကုန်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ၄ တွင်း၊ ပေါက်ခေါင်း မြို့နယ်အတွင်း ၄ တွင်း၊ နတ်မောက်မြို့နယ် လင်းကတိုး၊ ထနောင်းလှ၊ ပင်းဂွေးချို၊ ကျောင်းကုန်း၊ ကျောက်ပုံ၊ တောင်စု ကျေးရွာတို့တွင် ၆ တွင်းနှင့် ပန်းတောင်းမြို့နယ် မန်ကျည်းစုကျေးရွာရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်း တချို့တွင် အဝီစိတွင်းများ တူးဖော်ခဲ့ကြောင်း ကိုညီညီအောင်က ပြောသည်။
အ၀ီစိတွင်း တူးဖော်ရာတွင် ၎င်း ဒေသအနေအထားအရ ပေ ၁၀၀ မှ ၆၀၀ – ၇၀၀ ကျော်အထိ တူးဖော်ရလေ့ ရှိကြောင်း၊ တွင်းတတွင်း၏ တူးဖော်စရိတ်မှာ ကျပ် ၁၀ သိန်းကျော်မှ သိန်း ၃၀ အထိ ရှိတတ်ကြောင်း၊ သဲကုန်းမြို့နယ် ဆင်မြီးဆွဲ ကျေးရွာ၊ ကျူတော ကျေးရွာတို့ရှိ အ၀ီစိတွင်းများသည် ပေ ထောင်ချီ တူးဖော်သော်လည်း ရေ မထွက်၍ ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ မကြာမီ လပိုင်းအတွင်း ရေနံချောင်း၊ မကွေး စသည့် မြို့နယ်များအတွင်း အ၀ီစိတွင်းများ ဆက်လက် တူးဖော်ရန် စီစဉ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မိုးမေတ္တာ လူငယ်အဖွဲ့၏ အဆိုအရ သိရသည်။
မိုးမေတ္တာ လူငယ်အဖွဲ့အပေါ် ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တို့၏ သဘောထားနှင့် ပတ်သက်၍ “ရံဖန်ရံခါ လိုအပ်လို့ လာ မေးတာမျိုးလောက်တော့ ရှိတတ်ပါတယ်။ ပြည်မြို့ရဲ့ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း အရေးပေါ် သွေးလိုအပ်ချက်တွေကို ကျနော်တို့ အဖွဲ့က ကိုယ်ကျိုး မဖက်ဘဲ လုပ်ဆောင်ပေးနေတာဆိုတော့ သူတို့ အားပေးကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ သွေးလှူရှင် အဖွဲ့ထဲမှာ အားလုံးပါနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က ပါတီ နိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းရမယ် ဆိုတဲ့ မူကို ကိုင်စွဲထားတဲ့ အတွက် ဘာအရိပ် အယောင်မှ အစွန်းအထင်း မခံပါဘူး” ဟု အသင်းအတွင်းရေးမှူးက ဆိုသည်။
ဇွန်လတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် သုခ ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်း (ပြည်) နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်မြို့ဒေသခံ တဦးက “ပြည်မြို့မှာ အသပြာ ဆေးခန်း အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တောင်သူလယ်လုပ်တွေ၊ ချို့တဲ့သူတွေအတွက် အခမဲ့ ဆေးခန်းတခု လိုအပ် နေတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ အများအကျိုးအတွက် အခမဲ့ တာဝန်ယူပေးမယ့် ဆရာဝန် အခက်အခဲတော့ ရှိချင် ရှိလိမ့်မယ်” ဟု ပြောသည်။
ကိုကျော်သူ ဦးဆောင်သည့် နာရေးကူညီမှုအသင်းသည် ယခုလအတွင်း ၁၀ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
Posted by မောင်စေတနာ at 9:31 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
နည်းပညာသုံးစွဲနိုင်မှု ကွာဟချက် (Digital Divide)က တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နှေးကွေးစေနိုင်ပြီး အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု
နည်းပညာသုံးစွဲနိုင်မှု ကွာဟချက် (Digital Divide)က တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နှေးကွေးစေနိုင်ပြီး အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်သင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း နယ်ပယ်အသီးသီးမှ သုံးစွဲသူများက အကြံပြု
နည်းပညာသုံးစွဲနိုင်မှု ကွာဟချက် (Digital Divide)က တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နှေးကွေးစေနိုင်ပြီး အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်သင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း နယ်ပယ်အသီးသီးမှ သုံးစွဲသူများက အကြံပြု ပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။
''ဒီနေ့ခေတ်က Borderless IT ခေတ် ဖြစ်လာတယ်။ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုရဲ့ အဓိကနေရာမှာ နည်းပညာက ဦးဆောင်လာတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ မြို့ပြကျေးလက်အရ သာမကပဲ နိုင်ငံအလိုက်ပါ နည်းပညားသုံးစွဲနိုင်မှု ကွာဟချက် (Digital Divide) ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နှေးကွေးစေနိုင်တာ အမှန်ပါပဲ'' စင်ကာပူအခြေစိုက် Klevin Chia ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း၏ မြန်မာနိုင်ငံရုံးတာဝန်ခံ ဦးသန်းမောင်က ပြောပြပါသည်။
''အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ တိုးတက်မှုကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် နည်းပညာကို အသုံးချနိုင်မှု ကွာဟချက် (Digital Divide) ကို ကျဉ်းမြောင်းအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တာ ကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ နည်းပညာနဲ့ နည်းပညာရဲ့ စွမ်းအားကို အသုံးချနိုင်ခဲ့တာက တိုးတက်မှုရဲ့ အဓိကအချက် ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို အထင်အရှား တွေ့မြင်ရပါတယ်။ Digital Divide ကိုကျဉ်းမြောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းက တိုးတက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်''ဟု Myanmar Book Centre ၏ စီအီးအို ဒေါက်တာသန့်သော်ကောင်းက ပြောပြပါသည်။
Pfingo နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ပြန်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ပြည်ပရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေနဲ့ ပြည်တွင်းက မိသားစုဝင်တွေ ဆက်သွယ် ပြောဆိုမှုမှာ ဈေးသက်သာတဲ့ Pfingo က အဓိကပါပဲ။ ဒါကြောင့် IDD ခေါ်ဆိုမှုကရမယ့်ဝင်ငွေထက် သန်းဂဏန်း လောက်ရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် စာနာစေချင်ပါတယ်...
''လက်ရှိအချိန်မှာတင် ရနေတဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက် အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အားသာချက်တွေ ရခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ငွေပေးငွေယူ ကိစ္စတွေအတွက် ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အသွင်းအထုတ် အ၀င်အထွက်တွေကို ဘဏ်ကို သွားစရာမလိုဘဲ အင်တာနက်ကို သုံးပြီးတော့ စစ်ဆေးလို့ ရနေပါပြီ။ ဒါက အချက်တစ်ချက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။တခြား စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေမှာလည်း လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တွေ့နေစရာ မလိုပဲ အင်တာနက်က တစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်တွေ့ဆုံတာတွေ လုပ်လို့ရနေပါတယ်။ စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေက ဒါကို စတင် သုံးစွဲနေပြီ ဆိုပေမယ့် ကျန်တဲ့သူတွေ အားလုံး ကျယ်ပြန့်စွာ သုံးနိုင်ဖို့တော့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျေးလက်၊ မြို့ပြပါမကျန် နိုင်ငံအလိုက်ပါ Digital Divide ကျဉ်းမြောင်းဖို့ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ အချက် ဖြစ်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်''ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဦးမြတ်သင်းအောင်က ပြောပါသည်။
မျက်မှောက်ခေတ် အနေအထားအရ နည်းပညာ သုံးစွဲခြင်း ဆိုသည် ဇိမ်ခံပစ္စည်း(Luxury goods) သုံးစွဲခြင်း မဟုတ်တော့ဘဲ လူတိုင်းအတွက် အခြေခံ လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ဦးသန်းမောင်က သုံးသပ်ပါသည်။
''နည်းပညာ သုံးစွဲမှုဆိုတာ Luxury Goods သုံးစွဲမှု မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် လူတိုင်း တီဗီကြည့်နေကြသလို အင်တာနက် ကြည့်ရမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အင်တာနက်နဲ့ နည်းပညာ ဆိုတာကလည်း ဒီနေ့ခေတ် လူတွေရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက် ဖြစ်လာပါတယ်။ မြို့သားတွေမှ၊ ချမ်းသာတဲ့သူတွေမှ သုံးရတယ်ဆိုတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ ကျေးလက်မြို့ပြ တစ်ပြေးညီ သုံးစွဲရမယ့် အနေအထား ဖြစ်လာပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ တန်းတူ ဆက်ဆံဖို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း အင်တာနက်က အဓိက ဖြစ်လာပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်က စလို့ Digital Divide မှာ ကွာဟချက် ရှိနေမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာနဲ့အညီ ချိတ်ဆက်မှုမှာ ကျန်ရစ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက စောင့်ခေါ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထားခဲ့မှာပါ။ Digital Divide ကွာဟချက်ကို ကျဉ်းမြောင်းစေဖို့ လုပ်ဆောင်မှုက အရေးပါတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်လာပါတယ်''ဟု ဦးသန်းမောင် က ဆက်လက်ပြောပြသည်။
''ဒိုက်ဦးဘက်မှာ စာကြည့်တိုက်တစ်ခု တည်ထောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစာကြည့်တိုက်မှာ အင်တာနက်ကိုပါ တပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ eLibrary လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ လောလောဆယ်မှာတော့ စာအုပ်တွေအတွက် Database မရှိသေးလို့ အင်တာနက် သီးသန့်သုံးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာတင် အင်တာနက်ရဲ့ အကျိုးရှိမှုကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒေသခံတွေ အနေနဲ့ စာကြည့်တိုက်ကိုလာပြီး အင်တာနက်ကြည့်ပါတယ်။ စပါးဈေး၊ ပဲဈေးကအစ ကြည့်တတ်နေပါပြီ။ အရင်ကဆို ရေဒီယိုကတစ်ဆင့်ပဲ သူတို့နား ထောင်ခဲ့ရတာပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက လယ်သမားတွေ အင်တာနက် ကြည့်သလို သူတို့ကြည့်တတ်လာပါတယ်။ အားလုံး မဟုတ်ပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အထိအတွေ့ ရှိတဲ့သူတွေ ပေါ့လေ။ ဒီလိုမျိုးတွေဟာ ကျေးလက်နေရာစုံမှာ ကျယ်ပြန့်လာရင် ပိုကောင်းလာမယ့် အခြေအနေပါ''ဟု ဦးမြတ်သင်းအောင် က ပြောပါသည်။
''နည်းပညာကို သုံးစွဲနိုင်မှုဆိုတဲ့ နေရာမှာ အခြေခံအားဖြင့် အင်တာနက်ပေါ့။ အင်တာနက် သုံးစွဲရာကနေ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အပါအ၀င် အခြား ကိစ္စတွေမှာ အသုံးချလို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရလာမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ ကျေးလက်တွေမှာ အင်တာနက်သုံးဖို့ အလှမ်းကွာနေပါသေးတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ ကျေးလက်မြို့ပြသာမကပဲ နိုင်ငံ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှုမှာ အင်တာနက်က အရေးပါလာပါတယ်''ဟု ဒေါက်တာသန့်သော်ကောင်းက ဆိုပါသည်။
နည်းပညာသုံးစွဲနိုင်မှု ကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းစေရန်အတွက် အခြေခံအချက် ဖြစ်သော အင်တာနက် သုံးစွဲခွင့် ရရှိရေးတွင် ထိုသို့ သုံးစွဲခွင့် ရရှိရန်အတွက် အင်တာနက်တပ်ဆင်စရိတ် သက်သာရန်မှာ အရေးပါကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။
''ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ telecommunication sector မှာ အစိုးရက profit မယူရင် ပိုကောင်းမလားလို့ မြင်မိတယ်။ ယူလို့တော့ ရပါတယ်။ telecom sector ကို ပုဂ္ဂလိကကိုပေးပြီး ယူရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ ပုဂ္ဂလိကကိုပေးတာ တဖြည်းဖြည်း များလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကကိုပေးတယ် ဆိုတာ ရာနှုန်းပြည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတာကို ပြောတာပါ။ ပုဂ္ဂလိကများလာလို့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ များလာရင် ဈေးနှုန်းကျလာပြီး ၀န်ဆောင်မှု ကောင်းလာမှာပါ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပုဂ္ဂလိကကို ပေးတာတချို့ ရှိပေမယ့် အပြည့်အ၀ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကျွန်တော့်သဘောကတော့ telecom secotr မှာ အစိုးရက လိုအပ်တာကို ထိန်းချုပ်ပြီး profit မယူဘူးဆိုရင် ပိုကောင်းလာမယ်၊ ပြည်သူတွေလည်း ပိုသုံးခွင့်ရပြီး အကျိုးရှိလာမယ်၊ ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီ ချမ်းသာလာရင် နိုင်ငံတစ်ခုလုံး ချမ်းသာလာတာပဲ မဟုတ်လား''ဟု ဒေါက်တာ သန့်သော်ကောင်းက ပြောပါသည်။
''စာကြည့်တိုက်မှာ အင်တာနက် ချိတ်တော့ တခြား ဗာဟီရတွေနဲ့ ဆယ်ငါးသိန်းလောက် ကုန်သွားတယ်။ အမှန်ဆိုရင် ဒီဈေးနှုန်းက လူတိုင်းသုံးနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ လူတိုင်းသုံးနိုင်တဲ့နှုန်း ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာမှာပေါ့။ ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့ Digital Divide ကျဉ်းမြောင်းလာမှာပါ။ အခုချိန်မှာ ငါးသိန်းတန်ဖုန်းတွေကို အသုံးများလာသလိုပေါ့။ အင်တာနက်ကိုလည်း နိုင်ငံတကာမှာလို ဈေးသက်သာအောင် တပ်ဆင်ခွင့်ပေးထားရင် ပိုသုံးလာကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ သုံးတဲ့ သူပိုများလာရင် အင်တာနက်ကတစ်ဆင့် ရတဲ့ဝင်ငွေလည်း ပိုများလာမယ်။ အင်တာနက် အခုထက် ဈေးသက်သာလာမယ်ဆိုရင် စလောင်းတွေ တပ်သလို ကျွန်တော်လည်း အများကြီး လိုက်တပ်ပေးနိုင်တာပေါ့''ဟု ဦးမြတ်သင်းအောင်က ဆက်လက် ပြောပြပါသည်။
'နည်းပညာကို သုံးစွဲနိုင်မှုဆိုတဲ့ နေရာမှာ အခြေခံအားဖြင့် အင်တာနက်ပေါ့။ အင်တာနက် သုံးစွဲရာကနေ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အပါအ၀င် အခြားကိစ္စတွေမှာ အသုံးချလို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရလာမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာတော့ ကျေးလက်တွေမှာ အင်တာနက်သုံးဖို့ အလှမ်းကွာနေပါသေးတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ ကျေးလက်မြို့ပြသာမကဘဲ နိုင်ငံအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှုမှာ အင်တာနက်က အရေးပါလာပါတယ်' . . .
လက်ရှိအချိန်တွင် ပြည်တွင်း၌ အင်တာနက် တပ်ဆင်အသုံးပြုနေသူများအနက် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ADSL လိုင်း အသုံးပြုနေသူများမှာ ကနဦး တပ်ဆင်ခ (Setup Fee) ကို အနည်းဆုံး ငွေကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်မှ နှစ်ဆယ့်သုံးသိန်း ၀န်းကျင်အထိ ပေးသွင်းထားရပြီး လစဉ်ကြေး အနေဖြင့် 256kb လိုင်း အသုံးပြုနေသူများမှာ တစ်လလျှင် ငွေကျပ်သုံးသောင်း၊ 512kb လိုင်း အသုံးပြုနေကြသူများမှာ လစဉ်ကြေး အနေဖြင့် တစ်လလျှင် ငွေကျပ်ငါးသောင်း၊ နှစ်စဉ်ကြေး အနေဖြင့် ငွေကျပ်ခြောက်သောင်းကို ပုံမှန် ပေးသွင်းနေရကြောင်း သိရပါသည်။ Broadband အင်တာနက်လိုင်းကို တပ်ဆင် အသုံးပြုနေကြသူများမှာ ကနဦး တပ်ဆင်ခ အနေဖြင့် FEC 920 ပေးသွင်းထားရပြီး လစဉ်ကြေး အနေဖြင့် 256 kb လိုင်းမှ 512 kb လိုင်း အထိ တစ်လိုင်းချင်းစီ အတွက် တစ်လလျင် FEC 30 မှ FEC 130 အထိပေး သွင်းနေရပြီး နှစ်စဉ်ကြေး အနေဖြင့် တစ်နှစ်လျင် FEC 60 ပေးသွင်းပြီး အသုံးပြုနေကြရသူများ ဖြစ်ပါသည်။ WiMax အသုံးပြုနေကြသူများမှာ ကနဦးတပ်ဆင်ခ အတွက် FEC 1500 ပေးသွင်းရပြီး လစဉ်ကြေးများကို 45 FEC မှ 130 FEC အထိ ပေးသွင်းပြီး နှစ်စဉ်ကြေး အနေဖြင့်မူ တစ်နှစ်ကို FEC 60 ပေးသွင်း အသုံးပြုနေရကြောင်း သိရှိရပါသည်။
''မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ စုစုပေါင်းထဲက လူ ၁၀၀ မှာ ၀ ဒသမ ၆၉ ယောက်နှုန်းခန့်ပဲ သုံးနိုင်တာ တွေ့ရတယ်။ ၁၀၀ မှာ တစ်ယောက်တောင် အင်တာနက် မသုံးနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေတယ်။ တခြား ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် တော်တော်နည်းတဲ့ ပမာဏလို့ ပြောရမယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ Skype ကို သုံးပြီး ဆင်းရဲတဲ့ရွာတွေက ကလေးတွေကို ပညာသင်ကြားရေး အစီအစဉ်တွေ စတင် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ မြန်မာကျေးလက်ကို အင်တာနက်ရောက်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ အင်တာနက်က အခမဲ့ VoIP သုံးစွဲခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ဆီကတော့ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီက ပြည်သူတွေရဲ့ အခမဲ့ VoIP သုံးစွဲခွင့်အပေါ် လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး ခြယ်လှယ်ဖို့ ကြိုးစား နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကို ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို လိုက်မလား။ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို လိုက်မလားဆိုတာ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီမှာလည်း VoIP နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ပြည်သူတွေအတွက် သက်သာစေမယ့် လုပ်ဆောင်မှုတွေ စတင်သင့်ပါပြီ။ နိုင်ငံခြားက သာမန်ဖုန်းနဲ့ ခေါ်ဆိုတဲ့ IDD တန်ဖိုးတွေက ပြည်သူတွေအတွက် VoIP ထက်စာရင် ဈေးအရမ်းကြီးနေတယ်လေ။ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနဲ့အတူ VoIP သုံးစွဲမှုကလည်း တိုးတက်မှုကို အများကြီး ဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်''ဟု ပါစင်နယ်ကွန်ပျူတာမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာချုပ် ဦးတင်ညွန့်က ပြောပြသည်။
နည်းပညာကွာဟမှု(Digital Divide) ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများတွင် အင်တာနက် တပ်ဆင်ခနှုန်းထား ကြီးမြင့်နေခြင်းက အချက်တစ်ချက် ပါဝင်နေသကဲ့သို့ အင်တာနက်မြန်နှုန်း ကျဆင်းခြင်းကလည်း အချက်တစ်ချက် ဖြစ်နေခဲ့ကြောင်း သိရပါ သည်။
''ဒီနေ့ခေတ်မှာ တောနဲ့မြို့ပြရဲ့ အဓိက ကွာဟချက်မှာ အင်တာနက်က အရေးပါလာပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ အင်တာနက်က လူတန်းစားမရွေး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အနေအထား မရောက်သေးပါဘူး။ အင်တာနက်ကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ အသီးသီးမှာ တကယ် အသုံးချနိုင်ရင် အများကြီး အကျိုးရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်မြန်နှုန်း နိမ့်ကျနေပါတယ်။ မြန်နှုန်းကျဆင်းရတဲ့ ကိစ္စထဲမှာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့် ဆိုရင်တောင် ဒီကိစ္စရပ်တွေကို တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်း သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တရုတ်လို နိုင်ငံမျိုးမှာ နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းကိစ္စတွေ အတွက် အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို ပိတ်ပင်တာ ရှိပေမယ့် မြန်နှုန်းကျသွားတာမျိုး မရှိဘူး''ဟု Weekly Eleven News ဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးက ပြောပါသည်။
''အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကို ကျွန်တော်တို့လို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အနေနဲ့ကတော့ ကောင်းစေချင်တာပေါ့။ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်သာ ကောင်းမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်တို့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရတာ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါတာပေါ့ဗျာ။အခု ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာက 512Kbps လိုင်းတစ်လိုင်းကို သုံးနေတယ်။ လစဉ်ကြေးက ငါးသောင်း ပေးရတယ်။ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတစ်ခုမှာကျတော့ 30 Mbps ကို စင်ကာပူ ၆၉ ဒသမ ၁၂ ဒေါ်လာပဲကျတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ တွက်ကြည့်ရင် ကျပ် ၅၀၀၀၀ လောက်ပဲ ရှိတယ်။ အမြန်နှုန်းကျတော့ ၅၈ ဆတောင် ကွာပါတယ်။ ဒီလိုသာ တွက်ပြီးပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ 512 Kbps ဆို တစ်လကို ၈၆၂ ကျပ်ပဲ ပေးစရာ လိုတော့မယ်။ နောက်ပြီး တခြားနိုင်ငံတွေထက် မလျော့တဲ့ နှုန်းထားနဲ့ ပေးနေရတာဆိုတော ကျွန်တော်ကတော့ဗျာ 24/7 မပျက်တဲ့ အင်တာနက်ဆက်ကြောင်းရယ်၊ ပေးရတာနဲ့တန်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ အင်တာနက် မြန်နှုန်းကိုတော့ လိုချင်ပါတယ်''ဟု အိုင်တီမန်နေဂျာတစ်ဦးက ပြောပြပါသည်။
''မြန်မာနိုင်ငံမှာ သုံးစွဲနေရတဲ့ အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ လုံးဝ available မရှိသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ အင်တာနက်နဲ့ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ချင်ပေမယ့် ဘာမှလုပ်မရနိုင်အောင် ဖြစ်ရပါတယ်။ အင်တာနက် မြန်နှုန်း မကောင်းတဲ့အတွက် အင်တာနက်ရှေ့မှာ အချိန်တွေ ထိုင်ဖြုန်းနေရသလိုပါပဲ။ အင်တာနက်နဲ့ လုပ်တာချင်း အတူတူ၊ တခြား နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက လူတစ်ဦး တစ်နာရီအတွင်းမှာ အလုပ်တစ်ခုပြီးတယ်ဆိုရင် တစ်နာရီအတွင်း လုပ်တာချင်း အတူတူ ကျွန်တော်တို့မှာက အလုပ်မပြီးဘူး ဖြစ်နေပါတယ်' ဟု Solveware Solution ကုမ္ပဏီမှ ကိုငွေထွန်းက ပြောပြပါသည်။
လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်နှင့် ငွေကြေးစိုက်ထုတ်နိုင်မှု ရင်းနှီးအားချင်း တူသည့်တိုင်အောင် လက်ရှိ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု စနစ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာမူ နိုင်ငံတကာနှင့် အလှမ်းကွာမည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေနိုင်ကြောင်း စင်ကာပူ အခြေစိုက် Thales Solution Asia မှ ဆော့ဝဲမန်နေဂျာ ကိုသန့်သူရမျိုးက သုံးသပ်ပါသည်။
''လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်လည်း တူမယ်၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီးလည်း တူမယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံရဲ့ ပုံရိပ် ကွာဟမှုကိုလဲ မေ့ထားဦးမယ် ဆိုရင်တောင် မြန်မာပြည်က စီးပွားရေးတွေ နိုင်ငံတကာအဆင့် ရောက်လာဖို့ အင်တာနက်ကြောင့် ဝေးနေနိုင်သလို ဖြစ်နေတယ်။ Real Time Competition က နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းတဲ့အခါမှာ အရေးပါတဲ့အချက် ဖြစ်နေပါတယ်''ဟု ကိုသန့်သူရမျိုးက ပြောပါသည်။
''အင်တာနက် အခြေအနေက သက်ရောက်မှု တော်တော်ရှိနေပါတယ်။ ခုအခြေအနေက စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါ ဖြစ်နေရပါတယ်။ အင်တာနက်ကြောင့် လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံး မလည်ပတ်နိုင်ဘဲ ရပ်နေတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ဒီအတွက် အလုပ်ချိန် ပိုပေးလိုက်ရတာမျိုးတော့ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ-အီးမေးလ်မှာ Attachment File တစ်ခု ပါတယ်ဆိုရင်ပဲ အချိန် တော်တော်ပေးနေရပါတယ်။ ဒါမပြီးရင် နောက်ထပ် အလုပ်တွေလည်း လုပ်လို့မရတာမျိုး ကြုံရပါတယ်။ သူ့အတွက် အချိန်တစ်ခုပေးပြီး လုပ်နေရတာမျိုးပေါ့''ဟု Client Focus ကုမ္ပဏီမှ ဦးအောင်ကျော်မိုးက ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို အစိုးရပိုင်းက ထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Red Link ကုမ္ပဏီ၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် SkyNet ကုမ္ပဏီနှင့် MDS ကုမ္ပဏီများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို့အတူ FTTx အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု အတွက် မန္တလေးတွင် RedLink နှင့် Fortune ရန်ကုန်တွင် E-Lite Tech ၊ တာမိုးညဲချမ်းသာထွန်းဝေ ကုမ္ပဏီလီမီတက်၊ Red Link ၊Fortune၊ High Tech Princess၊ Myanmar Digital Signature (MDS) နှင့် Kinetic Energy အစ ရှိသော ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများမှာ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိရန် သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအတွက် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိခြင်းမှာ ကောင်းမွန်သည့် လက္ခဏာ ဖြစ်သော်လည်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ၏ ၀န်ဆောင်မှုမှာ ထူးခြားလာခြင်း မရှိသေးကြောင်း သုံးစွဲသူများမှ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
''အင်တာနက် သုံးစွဲနိုင်မှုနဲ့ မြန်နှုန်းက နိုင်ငံတကာနဲ့ ကွာနေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ကွာဟမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ လိုသလို၊ မြို့ပြနဲ့ကျေးလက် ကွာဟမှုလည်း ထိန်းပေးစေချင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးစွဲနိုင်မှု အရေးပါပြီး ကျောင်းသား လူငယ်တွေရဲ့ အင်တာနက် သုံးစွဲနိုင်မှုက တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်အကျိုးနဲ့ ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ အထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ WiFi စနစ်နဲ့ အင်တာနက် အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ပြုဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ အင်တာနက် မြန်နှုန်းကလည်း နိုင်ငံတကာမှာ ရရှိနေတဲ့ မြန်နှုန်းနဲ့ ကွာနေတဲ့အပြင် တချို့ အချိန်တွေမှာဆိုရင် လက်ရှိ ပေးနေတဲ့ အင်တာနက်မြန်နှုန်းရဲ့ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံတောင် မရပါဘူး။ တချို့လတွေမှာ တစ်လလုံးကို ၁၀ ရက် လောက်တောင် မကောင်းချင်ဘူး။ ပေးရတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ရရှိဖို့၊ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ်စေချင်ပါတယ်။အသုံးပြုခွင့် မပေးတော့တဲ့ Pfingo နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ပြန်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ပြည်ပရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေနဲ့ ပြည်တွင်းက မိသားစုဝင်တွေ ဆက်သွယ် ပြောဆိုမှုမှာ ဈေးသက်သာတဲ့ Pfingo က အဓိကပါပဲ။ ဒါကြောင့် IDD ခေါ်ဆိုမှုက ရမယ့်ဝင်ငွေထက် သန်းဂဏန်း လောက်ရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် စာနာစေချင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ပြည်သူလူထု အမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့ အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ပေးနိုင်ဖို့၊ မြန်နှုန်းမြှင့်ပေးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်''ဟု ကိုဝေဖြိုးက ဆက်လက် ပြောပြပါသည်။
လူဦးရေ ၅၆ သန်းရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အချိန်အထိ အင်တာနက်သုံးစွဲသူဦးရေ သုံးသိန်းငါးသောင်းကျော် ရှိနေကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်မှုများအရ သိရပါသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ အင်တာနက် သုံးစွဲမှုကို စစ်တမ်း ကောက်ယူနေ သည့် Internet World Stats ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်မူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက် သုံးစွဲမှုသည့် နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသေးကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အထိ ရရှိခဲ့သော ခန့်မှန်း ကိန်းဂဏန်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိုင်တီကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ရှိပြီး အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများအနက် ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆော့ဝဲလုပ်ငန်း၊ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်း၊ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဟာ့ဒ်ဝဲ ရောင်းချမှု လုပ်ငန်း၊ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့် ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကွန်ရက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးပြုခွင့် ပေးထားသော အင်တာနက်လိုင်း အမျိုးမျိုး
ကနဦး တပ်ဆင်ခ- FEC 1000
လစဉ်ကြေး- FEC 30 မှ FEC 130 အထိ။
နှစ်စဉ်ကြေး- FEC 60
သတ်မှတ်ထားသော Speed - 128 Kpbs မှ 512 Kbps အထိသာ။
*လက်ရှိအချိန်တွင် Broadband လိုင်း တပ်ဆင်မှု ရပ်ဆိုင်းထားသည်။
ကနဦးတပ်ဆင်ခ - ကျပ် ၁၄သိန်း
လစဉ်ကြေး - 256 Kbps လိုင်း အတွက် ကျပ် ၃၀၀၀၀၊ 512 Kbps လိုင်းအတွက် ကျပ် ၅၀၀၀၀။ 1Mbps လိုင်းအတွက် ကျပ်တစ်သိန်း၊2Mbps လိုင်းအတွက် ကျပ် နှစ်သိန်း။
နှစ်စဉ်ကြေး - ကျပ် ၆၀၀၀၀။
သတ်မှတ်ထားသော Speed - 128Kbps မှ 2Mbps အထိသာ။ 1Mbps လိုင်းနှင့်အထက်ကို အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ တပ်ဆင်ပေးကြောင်း သိရသည်။
ကနဦးတပ်ဆင်ခ - FEC 1000
လစဉ်ကြေး- FEC 30 မှ FEC 125 အထိ။
နှစ်စဉ်ကြေး - FEC 60
သတ်မှတ်ထားသော Speed - 128 Kbps မှ 512Kbps အထိသာ။
ကနဦး တပ်ဆင်ခ - FEC 1500
လစဉ်ကြေး - FEC 45 မှ FEC 130 အထိ။
သတ်မှတ်ထားသော Speed - 128Kbps မှ 512Kbps အထိသာ။
င်္FTTH(Fibre to the Home)
ကနဦး တပ်ဆင်ခ - ကျပ်ကိုးသိန်း
လစဉ်ကြေး- ကျပ် ၄၅၀၀၀ မှ ၁၂၅၀၀၀ အထိ။
နှစ်စဉ်ကြေး - ကျပ် ၆၀၀၀၀ (Voice and Data)
သတ်မှတ်ထားသော Speed - 512 Kbps မှ 2Mbps အထိသာ။
တစ်ဦးချင်းစီ အတွက် ရုပ်မြင်သံကြားစံနစ်တွင် 20Mbps နှင့် အထက်၊ Internet အတွက် 50 Mbps နှင့်အထက် ရရှိနိုင်မည်ဟု ဆိုထား။
*FTTH လိုင်းအတွက် စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်နေဆဲကာလ ဖြစ်ကြောင်းနှင် အချို့ နေရာများ၌ စတင် သုံးစွဲလျက်ရှိ။
McWill Broadband Wireless Access
ကနဦး တပ်ဆင်ခ - ကျပ်ငါးသိန်း
နှစ်စဉ်ကြေး - ကျပ် ၆၀၀၀၀
VoIP - ၅၀ ကျပ်(တစ်မိနစ်)
Fax - ၁၀၀၀၀ကျပ် (Activation Fee)
SMS Fee - ၂၅ကျပ်(1 Message)
အင်တာနက်အသုံးပြုခ နှုန်းထားများ - 128Kbps - ၂ကျပ် (တစ်မိနစ်)၊ 256 Kbps - ၃ကျပ် (တစ်မိနစ်)၊ 512 Kpbs - ၆ကျပ် (တစ်မိနစ်) 1Mbps - ၈ကျပ် (တစ်မိနစ်)။
SkyNet- Multi-Play Services
ကနဦး တပ်ဆင်ခ - ကျပ် ၁၀သိန်းခန့်
လစဉ်ကြေး - ကျပ် ၄၀၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀၀(Consumer)၊ ကျပ် ၁၅၀၀၀ မှ ကျပ် ၄၀၀၀၀၀(Corporate)
ရရှိနိုင်သော မြန်နှုန်း- 128Kbps မှ2Mbps အထိ
ရုပ်သံဝန်ဆောင်မှု အတွက် နှစ်စဉ်ကြေး - ကျပ် ၂၁၆၀၀၀
ဖုန်းလိုင်းအတွက် နှစ်စဉ်ကြေး - ၅၀၀၀၀ ကျပ်
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဒေသတွင်း နိုင်ငံ အချို့၏ အင်တာနက် အသုံးပြုမှု ကုန်ကျစရိတ် နှိုင်းယှဉ်ချက်
ပျမ်းမျှရရှိသော Connection Speed
၁။ မြန်မာ 0.25Mbps (256Kbps) မှ 2Mbps အထိ ငွေကျပ် ၁၄ သိန်း(MPT)
$ 1000 (ရတနာပုံတယ်လီပို့) ၁၃၀၀၀၀ကျပ်*
$ 1500 (WiMax) ၁၃၀၀၀၀ကျပ်*
(မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသော အခြား အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုများကို တစ်ဖက်ပါ ဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။)
ထိုင်း 0.50 Mbps(512Kbps)မှ 8 Mbpx နှင့်အထက်
အခမဲ့ Bath 599 (4Mbps အတွက်)
၃။ စင်ကာပူ 3Mbps မှ 100 Mbps နှင့်အထက် အခမဲ့ $26.48 (3Mbps အတွက်)
၄။ မလေးရှား 0.25Mbps မှ 100Mbps နှင့်အထက် RM908 RM 69(1Mbpsအတွက်)
၅။ အင်ဒိုနီးရှား 0.50 Mbps မှ 3Mbps နှင့်အထက် Rp 75000 Rp 195000 (384Kbps အတွက်)
၆။ ဖိလစ်ပိုင် 0.50Mbps မှ 2Mbps နှင့်အထက် အခမဲ့ P 795 (512Mbps အတွက်)
မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာသို့ IDD(International Direct Dialling) ခေါ်ဆိုခ နှုန်းထားနှင့်
အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် VoIP ဖုန်းဖြင့် ခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထား နှိုင်းယှဉ်ချက်
IDD ခေါ်ဆိုမှု တစ်မိနစ်နှုန်းထား
VoIP ခေါ်ဆိုမှု တစ်မိနစ်နှုန်းထား
(Skype to Mobile ကျပ်ငွေဖြင့်)
(Pfingo to Mobile ကျပ်ငွေဖြင့်)
ထိုင်း ၁.၄၀ ၂၀၀ ၁၀၀
ဟောင်ကောင် ၁.၇၅ ၅၀ ၅၀
မလေးရှား ၁.၇၅ ၁၅၀ ၁၀၀
ပါကစ္စတန် ၁.၇၅ ၃၀၀ ၃၀၀
စင်ကာပူ ၁.၇၅ ၅၀ ၅၀
အိန္ဒိယ ၁.၉၀ ၂၀၀ ၁၀၀
တရုတ် ၂.၂၅ ၅၀ ၅၀
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၂.၇၀ ၃၀၀ ၁၅၀
အင်ဒိုနီးရှား ၂.၉၀ ၃၀၀ ၂၅၀
ပြင်သစ် ၃.၂၀ ၄၀၀ ၄၀၀
အီတလီ ၃.၂၀ ၅၀၀ ၆၀၀
နယူးဇီလန် ၃.၂၀ ၅၀၀ ၈၀၀
အင်္ဂလန် ၃.၂၀ ၅၀၀ ၅၀၀
ဘရာဇီးလ် ၄.၅၀ ၄၀၀ ၆၀၀
ကာတာ ၃.၂၀ ၆၀၀ ၅၀၀
ဂျပန် ၂.၇၀ ၃၀၀ ၄၀၀
တောင်ကိုရီးယား ၂.၉၀ ၂၀၀ ၁၅၀
အမေရိကန် ၄.၅၀ ၅၀ ၁၀၀
ဖိလစ်ပိုင် ၂.၉၀ ၅၀၀ ၃၀၀
ဗီယက်နမ် ၂.၇၀ ၅၀၀ ၂၀၀
ဂျာမနီ ၃.၂၀ ၅၀၀ ၄၀၀
ယူအေအီး ၄.၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀
ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ လူဦးရေနှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုသူ အရေအတွက်
မြန်မာ ၅၆ သန်း သုံးသိန်းငါးသောင်းကျော်
၂။ ထိုင်း ၆၆ သန်း ၁၆ သန်းကျော်
၃။ စင်ကာပူ ၅ သန်း ၄ သန်းနီးပါး
၄။ မလေးရှား ၂၉ သန်း ၁၆ သန်းကျော်
၅။ အင်ဒိုနီးရှား ၂၂၉ သန်း သန်း ၃၀ ကျော်
၆။ ဖိလစ်ပိုင် ၉၁ သန်း ၂၄ သန်းကျော်
၇။ ဗီယက်နမ် ၈၅ သန်း ၂၂ သန်းကျော်
၈။ ကမ္ဘောဒီးယား ၁၄ သန်း ၇ သိန်းကျော်
၉။ ဘရူနိုင်း ၄ သိန်း ၃ သိန်းကျော်
၁၀။ လာအို ၆၃ သိန်း ၅ သိန်းကျော်
Posted by မောင်စေတနာ at 7:33 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံး နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်လာဖွယ်ရှိ
လာမည့် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ အထိ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မည့် အလားအလာမရှိ သေးကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်လာဖွယ်ရှိကြောင်း Myanmar Climate Change Watch ၀က်ဘ်ဆိုက် တွင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ပြောကြားထားပါသည်။
မဟာသင်္ကြန် အကြိုကာလကတည်းက နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒေသများတွင် အပူရှိန်ကို သိသာစွာခံစားနေရပြီဟု သိရှိ ရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ် ဧပြီလနှင့်မေလတို့မှာ နှစ်တစ်နှစ်၏ အပူဆုံးလများ ဖြစ်ကြပြီး ယမန်နှစ် က ထူးထူးခြားခြား မိုးခေါင်ခဲ့မှုကြောင့် စံချိန်သစ် ၂၁ ခု တင်သည် အထိ အပူချိန်ပြင်းထန်ခဲ့သည်။ ယခု နှစ်အတွက် ထူးခြားသည့် နေ့အပူချိန် များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့က ချောက်မြို့တွင် ၄၃ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်၊ မြင်းခြံနှင့် အောင်လံမြို့ တို့တွင် ၄၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ကလေး၊ မုံရွာနှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ၄၁ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အသီးသီးရှိခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားချက်များအရ သိရှိရသည်။
ဧပြီလ ၁၈ရက်နေ့က တိုင်းထွာချက်များအရ စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် ဧပြီလ၏ ပျမ်းမျှအပူချိန်ထက် ၃ ဒဂရီစင်တီဂရိတ် မှ ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ဧပြီလ၏ပျမ်းမျှ အပူချိန်ထက် ၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အထိပိုခဲ့ကြောင်း မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အနေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ခံစားခဲ့ရသော အပူချိန်မျိုးကို ခံစားရဖွယ် မရှိသော်လည်း ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အပူချိန် မှာ ၃၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (၁၀၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)အထိ ရှိနိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ဆိုပါသည်။
“မနှစ်ကလောက် မပူတာ သေချာပေမယ့် ပူပြင်းတဲ့အပူချိန်ပါပဲ။ ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ မိုးတိမ် တောင်တွေဖြစ်ရာကနေ ထစ်ချုန်းမိုး အနည်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။ ရွာမယ့် မိုးကလည်းမများသလို ပူမယ့်အပူ ရှိန်ကလည်း ရက်အနည်းငယ်ပဲ ဖြစ် နိုင်ပါလိမ့်မယ်”ဟု Myanmar Climate Change Watchတွင် ဒေါက် တာထွန်းလွင်က ပြောကြားထားပါ သည်။
မုန်တိုင်းအခြေအနေနှင့်ပတ် သက်၍လည်း ၎င်းက”ဧပြီလ ၂၆ ရက် နေ့အထိ မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အလား အလာမရှိသေးပါဘူး။ တစ်ခုပဲသတိ ထားရမှာက မိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ် ရင် နေရာကွက်ပြီး မိုးကြိုးပစ်တာနဲ့ လေပြင်းတိုက်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဧပြီလကုန်ပိုင်း မှစတင်ပြီး မိုးကြိုမုန်တိုင်းများအား စတင် သတိထားရလေ့ရှိပြီး ယခုနှစ် သည် လာနီညာရာသီဥတု၏ သဘောသဘာဝနှင့် သက်ရောက်မှုများ ကိုကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်၍ လာနီညာ မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေများကို သတိပြု ရန်လိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်များက ခန့်မှန်မှုများရှိနေသည်။
ဧပြီနှင့် မေလများ၏ အခြေခံ ပူပြင်းမှုများနှင့် လာနီညာ၏ စိုထိုင်းမှုတို့ ပေါင်းစပ်ပါက ရာသီဥတုပြင်း ထန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် မိုးတိမ်တောင်များ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး မိုးတိမ်တောင်၏ သက်ရောက်မှုဖြစ်စဉ် များ ဖြစ်သော လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်ခြင်းတို့ကို ပိုမိုသတိပြုရ မည်ဟု သိရသည်။
Posted by မောင်စေတနာ at 9:57 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
နယ်ချဲ့တွေကကျွန်ပြုဖို့ ကျွန်တော်တို့ဆီကိုလာတယ် ။
ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကမရှိဘူး အမေရယ် ။
ခု……..ကျွန်ပဲဖြစ်နေသေးတယ် အမေ ။
ကျွန်တော်ရဲ့ရဲရင့်မှု့တွေကပဲ လွဲနေလို့လား ။
အမေပြောတော့ အလုပ်လုပ်ရင်ကြီးပွားမယ်ဆို ။
သူတို့မှာ မရှိဘူး အမေရဲ့
ပြန်မစုတ်ချင်တဲ့ သရက်စေ့တစ်စေ့ပေါ့ ။
မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး ကြွေးကြော် နေရမှာလား ။
ဆေးထည့်လို့ရမှာ…….. အမေ ။
တစ်ချို့ဆို တော်တော်ကိုဆိုးတယ.် ……အမေ ။
ရွှေစာရင်းထဲက ကျွန်တော်ထုတ်တယ်……အမေ ။
ဘာသာရေးအဓိကရုန်း မရှိဘူး ၊
သူတို့ကို အချစ်နဲ့လှောင်ထားတာ ။
အမုန်နဲ့လှောင်ထားခြင်း ခံရတယ်………အမေရယ် ။
ဖိနှိပ်သူတွေရဲ့နှုတ်ခမ်းမှာ မပွင့်ဘူး……….အမေ ။
Posted by မိုးယံ at 11:11 AM7comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မြွေ နဲ့အတူတူ ရေချိုးနေတာလေ......
မြို့ကိုသွားပြီး အလုပ်ဆင်း၊ဈေးသွား ၊ရွာများစွာက ဘုရားပွဲတော်တစ်ခုသို့ အသွား ရထားခရီးစဉ်တစ်ခု......
ပင်လယ်ကမ်းခြေ မှာ ရေစိမ်ရင်း နေပူစာလှုံ လို့ စားရင်းသောက်ရင်းပေါ့.....
တီရုပ်ပြီက အပန်းဖြေ ရေကူးကန် ထဲမှာ နေရာကျန်သေးတယ်နော်......
သူ့ကိုလဲရေဆေးဆီထိုး မှ .....................
ဈေးကွက်တင်မဲ့ ဖရဲသီးများ ပက်ကင် ထုပ်ပိုးနေစဉ်......
သူတို့မြို့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာကတော့ လွတ်လပ်မှုက အန္တရာယ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်
နေတဲ့အထိ လွတ်လပ် လွန်းတာကြီးကတော့ ...............................
(ရွာသားလေး က မတ်လ 14, 2011 နေ့ 9:30pm မှာတင်ခဲ့ပါတယ်)
သူငယ်ချင်းများဆိုဒ်ထဲက ရွာသားလေး ဘလော့ကို ဆက်ပြီးကူးယူတင်ပြပေးတာပါ..
Posted by မိုးယံ at 11:46 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
သုက်ပိုး​​လှုပြီး​ ​ငွေရှာ​​နိုင်သည့်​ တရုတ်​​​ကျောင်း​သား​များ​
တရုတ်နိုင်ငံမှ ​ကျောင်း​သား​များ​အ​နေနှင့်​ သုက်ပိုး​လှူပြီး​ ​ငွေရှာနိုင်သည့်​ အခွင့်​အလမ်း​မျိုး​ ရ​နေ​ကြောင်း​ သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ မြို့​ကြီး​များ​တွင် ​နေထိုင်​သော စုံတွဲများ​အနက် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း​မျှသည် သား​သမီး​ မရနိုင်သည့်​ အ​ခြေအ​နေနှင့်​ ကြုံ​နေရသည်။
ဂွမ်​ဒေါင်း​ရှိ ငယ်ရွယ်ကျန်း​မာ​သော ​ကျောင်း​သား​လေး​များ​သည် ယင်း​​အ​ခြေအ​နေ​အတွက် အ​ဖြေတစ်ခုအဖြစ် တရုတ်​ကျန်း​မာ​ရေး​ ဝန်ကြီး​ဌာနက ယုံကြည်ထား​သည်။ ကျန်း​မာ​ရေး​ ဝန်ကြီး​​ဌာနက အသက် ၂၂ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်ကြား​ ကျန်း​မာ​ရေး​ ​ကောင်း​မွန်သူများ​အား​ တစ်သက်တာတွင် သုက်ပိုး​​တစ်ကြိမ် လှူဒါန်း​ရန် ခွင့်​ပြုထား​သည်။ သို့​သော် ယင်း​ လူစာရင်း​တွင် နိုင်ငံခြား​သား​များ​နှင့်​ လိင်တူဆက်ဆံသူ Gay များ​ မပါဝင်​ချေ။ ​ရောဂါကင်း​စင်ပြီး​ ပြည့်​စုံ​ကောင်း​မွန်​သော သုက်ပိုး​​လှူဒါန်း​ထား​သူသည် ၎င်း၏ သုက်ပိုး​အား​ က​လေး​လိုချင်​သော စုံတွဲတစ်တွဲအတွက် အသုံး​ပြုပြီး​ချိန်တွင် ​ထောက်ပံ့​ကြေး​ ယွမ် ၃၀၀၀ ​ပေး​အပ်သွား​မည်ဟု ဂွမ်​ဒေါင်း​ သုက်ပိုး​ဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူများ​က ​ပြောကြား​ခဲ့​သည်။
ယခုလုပ်ရပ်သည် သုက်ပိုး​ကို ​ရောင်း​စား​ခြင်း​ဟု သတ်မှတ်ရန် မသင့်​ကြောင်း​၊​ မိမိတို့​သည် အစား​အ​သောက်နှင့်​ ခရီး​စရိတ်တို့​အတွက် ရည်ရွယ်​ထောက်ပံ့​မှု ပြုလုပ်​ပေး​သည့်​ သ​ဘောမျိုး​သာဖြစ်​ကြောင်း​ တာဝန်ရှိသူများ​က ​ပြောကြား​ခဲ့​သည်။ ဂွမ်​ဒေါင်း​ရှိ သုက်ပိုး​ဘဏ် ၁၀ ခုတို့​တွင် ပြီး​ခဲ့​သည့်​နှစ်က စုစု​ပေါင်း​ သုက်ပိုး​လှူဒါန်း​သူ ၉၀၀ ​ကျော်ထိ ရှိလာပြီး​ ယင်း​မတိုင်မီ နှစ်ကထက် နှစ်ဆပိုများ​လာခြင်း​ဟု သိရှိရသည်။
Posted by မိုးယံ at 6:27 PM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: လူမှုဘ၀ ရသစုံလင်
အချက်အလက်များကို Web Site တစ်ခုတည်းသာ မဟုတ်ဘဲ Gtalk ကပါ ရှာဖွေပေးနိုင်ခြင်း
Gtalk ကို Chatting အတွက်သာမက မိမိလုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Gtalk သုံးစွဲဖို့ အကောင်းဆုံး အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတော့
အရင်တုန်းကလို အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ ဘာသာပြန် ထည့်သလို၊ အိုင်တီနဲ့ပတ်သက်တာတွေ မေးမြန်းလို့ရတဲ့ အကောင့်လိုပဲ လုပ်ငန်းလိပ်စာတွေအတိအကျ လိုချင်သလို အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်တဲ့ အကောင့်တွေကတော့ gtalk@themyanmardirectory.com နဲ့
mydirectory@bot.im ကိုinvite လုပ်ထားရုံနဲ့ သိချင်တဲ့လိပ်စာတွေ အလွယ်တကူ ရန်ကုန်ဒိုင်ယာရီ စာအုပ် မလိုပဲ သိရှိနိုင်တဲ့ အကောင့်လေးတွေပါ။
source by Dailymail.
Posted by မိုးယံ at 3:33 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၃ခုနှစ် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်သူများ ဘုရားဖူးသွားခြင်း၊ ငှက်ဘေးမဲ့လွှတ်ခြင်း၊ ငါးဘေးမဲ့လွှတ်ခြင်း နှင့် စတုဒီသာကျွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်၊ Happy World ခေတ်မီသဘာဝဥယျာဉ်၊ တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ကန်တော်ကြီး အပန်းဖြေဥယျာဉ်တို့တွင်လည်း လာရောက်အပန်းဖြေသူများ၊ ဆော့ကစားသူများဖြင့် စည်ကားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် စတုဒီသာအဖြစ် ထမင်းထုပ်များဝေနေသည်ကို တွေ့ရစဉ်
ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ ဘုရားဖူးလာသူများကို မြောက်ဘက်စောင်းတန်းတွင်တွေ့ရစဉ်
ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့မြောက်မုဒ် သွေးဆေးကန်တွင် ဇိဝိတဒါန ငါးလွှတ်နေကြသူများ
မဟာဝိဇယစေတီတွင် အအေးဖြင့် စတုဒီသာတိုက်ကျွေးနေသည် တွေ့ရစဉ်
မဟာဝိဇယစေတီတော်တွင် နေမင်းမှအလင်းရောင်ဖြင့် ပူဇော်နေသည်ကို လာရောက်ဖူးမျှော်နေသူများ
မဟာဝိဇယစေတီတော်တွင် နေမင်းမှအလင်းရောင်ပူဇော်နေသည်ကို လာရောက်ဖူးမျှော်နေသူများ
နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာကြီးတွင် ဘိုးဘွားများအား တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ပေးနေသူများ
ပြည်သူ့ရင်ပြင်နှင့် ပြည်သူ့ဥယျာဉ်တွင် လာရောက်ဆော့ကစား အပန်းဖြေနေသူများ
အောက်ပါပုံများကတော့ မနေ့ကပို့စ်မှာ ဖြည့်စွက်ရမှာ ပျင်းလို့ ဒီမှာပဲ သူ့အတိုင်းလေး ထားလိုက်တယ် :D
Posted by မိုးယံ at 10:03 AM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: ဓါတ်ပုံ, မှတ်မှတ်ရရ
slip ၂၀၁၁ သင်္ကြန် ဓာတ်ပုံအချို့
ဧပြီလ ၁၄ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့ နံနက် ၁၀နာရီက ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးကန်ပတ်လမ်း မြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၄ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့ ညနေ ၄နာရီခွဲဝန်ကျင်က ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးရှေ့ မြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၄ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့ နံနက် ၁၀နာရီဝန်းကျင်က ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးကန်ပတ်လမ်းရှိ မဏ္ဍပ်များအနီးတွင် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေစဉ်
ဧပြီလ ၁၄ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ အနော်ရထာလမ်းပေါ်ရှိ မဏ္ဍပ်တစ်ခုအား တွေ့ရစဉ်
ဧပြီလ ၁၄ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့ နံနက် ၉နာရီခွဲအချိန်က ရန်ကုန်မြို့ကန်တော်ကြီး ကန်ပတ်လမ်းသို့ ၀င်ရောက်ရန် ရေပက်ခံကားများ စောင်ဆိုင်းနေစဉ်
ဧပြီလ ၁၄ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့ ညနေ ၅နာရီကျော်က ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အင်းစိန်လမ်းမကြီး တစ်နေရာ မြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၄ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့ မွန်းလွဲ ၃နာရီကျော်က ရန်ကုန်မြို့ အနော်ရထာလမ်းမပေါ်၌ ရေပက်ခံထွက်မည့်ကားများ စောင့်ဆိုင်းနေကြစဉ်
ဧပြီလ ၁၄ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့ ညနေ ၄နာရီကျော်က ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ဖြူယာဉ်မောင်းသင်တန်းကွင်းအတွင်းရှိ ရခိုင်ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲတော် ကျင်ပနေပုံ မြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၄ ရက် သင်္ကြန်အကျနေ့ မန္တလေးမြို့ ကျုံးတောင်ဘက် ၂၆ ဘီလမ်းရှိ Alpine မဏ္ဍပ်တွင် နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်များက နံနက်ပိုင်းနှင့် နေ့လယ်ပိုင်းများတွင် သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ရာ လည်ပတ်သူများဖြင့် တိုးမပေါက်အောင် စည်ကားခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ဧပြီလ ၁၄ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့ နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ရေကစားမဏ္ဍပ် တစ်ခုတွင် ရေကစားကြသူများဖြင့် စည်ကားနေသည်ကို တွေ့မြင်ရစဉ်
ဧပြီလ ၁၄ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့ နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ရေကစားမဏ္ဍပ် တစ်ခု မြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ နံနက် ၈နာရီက ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် မဟာသင်္ကြန်မဏ္ဍပ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် မဟာသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ဖွင့်ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်မြိုတော်ဝန် ဦးလှမြင့်
ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းပေါ်ရှိ X2O မဏ္ဍပ်အား သင်္ကြန်အကြိုနေ့ နေ့လည်၁၂နာရီခန့်က တွေ့မြင်ရစဉ်
ဧပြီလ ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ နံနက် ၁၁နာရီဝန်းကျင်က ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းရှိ ရေကစားမဏ္ဍပ်များ မြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ နံနက် ၁၁နာရီဝန်းကျင်က ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးကန်ပတ်လမ်းရှိ ဈေးဆိုင်များမြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ညနေ ၅နာရီဝန်းကျင်က ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးကန်ပတ်လမ်းမြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ညနေ ၄နာရီဝန်းကျင်က ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်း Air Bagan မဏ္ဍပ်ရှေ့ မြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ညနေ ၃နာရီခွဲဝန်းကျင်က ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း မြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ညနေ ၄နာရီဝန်းကျင်က ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်း မြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ နေပြည်တော်မြို့တော်ဝန် မဟာသင်္ကြန်မဏ္ဍပ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်း
ဧပြီလ ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ဟိုတယ်မဏ္ဍပ်များတွင် ရေကစားသူများဖြင့် စည်ကားနေစဉ်
အကြိုနေ့တည်းက စည်ကားတဲ့ မန္တလေးသင်္ကြန်
ဧပြီလ ၁၃ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ မန္တလေးမြို့တော်ဝန် မဟာသင်္ကြန်မဏ္ဍပ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်း
ဒါက တံတားဘက်မှာ ဖြစ်မယ်
အနောက်ကဆိုင်းပုဒ်နဲ့ ဝတ်စားထားတာတွေက သိပ်မလိုက်ဖက်သလိုပဲ
More info : http://groups.google.com/group/myanmar-daily-info-n-general-knowled...
Posted by မိုးယံ at 11:52 PM4comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မြန်မာနိုင်ငံမှ မြင်တွေ့ခွင့်ရနိုင်သော ကြယ်မိုးရွာ...
နည်းပညာသုံးစွဲနိုင်မှု ကွာဟချက် (Digital Divide)က တ...
မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံး နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်...
သုက်ပိုး​​လှုပြီး​ ​ငွေရှာ​​နိုင်သည့်​ တရုတ်​​​ကျော...
အချက်အလက်များကို Web Site တစ်ခုတည်းသာ မဟုတ်ဘဲ Gtal...
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
မြင်ချင်တာ နဲ့ ကြားနေရတာ
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာမူ (၅)ရပ်
2011, April လ နှစ်သစ် အတွက် အထူး ဗေဒင် ဟောစတမ်း ....
ကွန်ပျူတာ အမေးအဖြေ များ လေ့လာရန် ....
ဘာမှသုံးမရတဲ့ ဖအေ (အဖေ)